MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA DOGO ARGENTINO IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka eeyga Dogo Argentino iyo Sawiro
Saley the Dogo Argentino oo 17 bilood jira— 'Dogo's waxay leeyihiin jaakado cad oo u nuglaada xasaasiyadda (iyo sida noocyada kale ee cad ee dahaarka u leh dhago la'aanta iyo indho la'aanta) Waxaan kula talin lahaa in la siiyo cunno tayo sare leh, oo aan hadhuudh lahayn. Holistic ama ceyriin waa habka loo maro maaddaama wax kasta oo kale ay si murugo leh ku muujinayaan tayada jaakadda. '
Dogo Argentino waxaa sidoo kale loo yaqaan Mastiffka reer Argentine ama reer Argentine Dogo. Waa eey weyn oo si fiican u murqo leh. Laabta qoto-dheer ayaa fidsan. Maqaar fara badan ayaa saaran qoorta muruqyada. Madaxa waa mid ballaaran oo leh qaab wareegsan horay iyo gadaal. Xuubka afku wuxuu u jaleecayaa waxoogaa kor u dhaaf ah, xoogaa joogsi ah wuxuuna la eg yahay dhererka dhakada. Daamanku waa xoog badan yihiin. Ilkaha waa inay ku kulmaan qaniinyada maqas. Sanku waa madowyahay. Indhaha si fiican ayaa loo kala saaraa, waana bunni mugdi ah, midab khafiif ah ama midab cagaar ah. Wareegyada indhaha waa inay noqdaan casaan ama madow. Dhegaha ayaa kor loo taagay oo badanaa waa la gooyaa si looga dhigo inay istaagaan, iyo qaab saddex xagal ah. Bawdyaha waa muruq muruqyo gaaban. Badanaa ma jiraan wax soo dew ah. Dabada qaro weyn ayaa dheer oo si dabiici ah u hooseeya ayaa gaadhay hock. Dharka qaro weyn ee dhalaalaya ayaa ah mid cad oo aan lahayn hoosta. In kasta oo aan laga aqbalin kooxaha oo dhan, mararka qaarkood Dogo Argentino wuxuu yeelan karaa meel madow oo madaxa ah oo loo yaqaan 'pirata.' Sifadan ku jirta jaakadda Dogo´s waxaa aqbalay Federacion Cinologica Argentina.
Reer Argentine Dogo waa eey daacad ah oo sameeya ilaaliye weyn oo guriga iyo qoyska ah. Ciyaar iyo aad u wanaagsan carruurta, waxay siisaa dhunkasho iyo laablaabasho. Caqli badan oo awood badan, Dogos way fududahay in la tababaro hadaad joogto tahay, adoo adeegsanaya awood jacayl laakiin adag. Dogo-ka reer Argentine maahan nooc qof walba. Iyadoo milkiilayaasha saxda ah xitaa kuwa loo yaqaan 'Dogos' ay awood u yeelan karaan inay u hoggaansamaan dadka oo dhan iyo xayawaanka kale. Noocani wuxuu u baahan yahay qof fahmaya sida loo muujiyo hogaaminta: aadanaha oo adag, kalsooni leh, oo iswaafaqsan. Noocani wuxuu u baahan yahay xeerarka ay tahay inuu raaco oo ku xaddidan waxa uu yahay oo aan loo oggolayn inuu sameeyo. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markaan aadane la noolaano eeyaha, waxaan noqonaa xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa. Adiga iyo aadamaha oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta. Markaad noocgan ku dhajisid milkiile debecsan ama dadban, dhibaatooyin ayaa soo bixi kara sida eygu u dareemi doono inuu u baahan yahay inuu 'badbaadiyo xirmadiisa' oo uu maamulo bandhigga. Dadka waaweyn ee Dogos waxay la dagaali karaan eyda kale si kastaba ha noqotee, Dogo badanaa ma kiciso iskahorimaadka laakiin waxay dhici kartaa haddii uu dareemo eey kale oo aan degganeyn. Noocani wuxuu u baahan yahay milkiile u sheegi kara Dogo in shaqadiisu ahayn inuu eey kale meeshiisa dhigo. Waxay ku fiican yihiin xayawaanka kale haddii ay kula soo koraan eeyaha. Mastiffkan cad wuxuu ubaahanyahay waqti hore is dhexgalka bulshada xoolaha kale. Waxay sidoo kale u baahan tahay waqti hore tababarka adeeca .
Dhererka: 24 - 27 inji (61 - 69 cm)
Miisaanka: 80 - 100 rodol (36 - 45 kg)
Noocan ayaa ku fiicnaan doona guri dabaq ah haddii si ku habboon loo jimicsado oo ugu fiican ugu yaraan ugu yaraan celcelis cabbirkiisu le'eg yahay. Hubso inaad soo geliso Dogo gudaha marka heerkulku hoos uga dhaco qaboojinta.
Sii eygan jimicsi badan. Waxay u baahan yihiin in lagu qaado a maalin kasta, socod dheer ama orod.
Ey tilmaamaya bunni iyo caddaan
Koodhka kaliya ee cad waa mid aad u fudud in la daryeelo. Caday mar mar. Ciddiyaha ha la jaro. Ma laha ur eyga u eg. Noocani waa celcelis daadiya.
1920-meeyadii ayaa Argentin Dogo waxaa lagu horumariyey dalka Argentina Dr. Antonio Nores Martinez iyo walaalkiis Agustin. Walaalaha waxay rabeen eey wehel ah oo isna ahaa ugaarsade wanaagsan oo ilaaliya. Noocyada loo isticmaalay horumarka ayaa ahaa Pyrenees weyn , Irish Wolfhound , Tilmaame , Daanyeer Weyn , Dogue de Bordeaux , Feedhyahan , Isbaanish Mastiff , Bulldog , Dibi Dibi iyo hadda ah nooc mastiff dabar go'ay nooc loo yaqaan Eyga Cordoba. Natiijadu waxay noqotay ugaarsi, ugaarsade aan baqdin lahayn oo isaguna lahaa adkaysi weyn. Koodhka cad ayaa leexiyay kuleylka halkii uu ka nuugi lahaa. Nasiib darrose noocani wuxuu sumcad xumo ku helay Ingiriiska markii dadku bilaabeen inay eeyaha u adeegsadaan la dagaallanka eeyga, taas oo ah waxqabad weli caan ka ah qaybo badan oo ka tirsan Koonfurta Ameerika iyo meelo kale. Halkii laga daba tagi lahaa dagaalyahanada eeyga, Ingiriiska wuxuu soo saaray sharci qaran oo lagu xakameeyo eeyaha meel fagaare ah. Sharciga eeyaha halista ah ee yimid 1991 wuxuu gebi ahaanba mamnuucayaa saddexda nooc Fila Brazileiro , Dogo Argentino iyo Jabbaan Tosa . Nooc afraad, ayaa Godka Dibida Maraykanka , waa la oggol yahay laakiin aad baa loo xadiday. Eeyaha waa in la diiwaangeliyo, la dhexdhexaadin karo, la sawiran karo, la keydin karo, milkiilayaashuna waa inay caymis qaataan Eeyaha lama dhaqi karo ama lama soo dejin karo oo marka ay bulshada dhexdeeda ku sugan yihiin waa in qofka laga weyneeyaa, leasiya oo gacanta ku dhigaa qof ka weyn 16 sano markasta. Tani waa ceeb dhab ah. Markii si sax ah loo kiciyey kuwan oo dhan waa eeyo waaweyn. Eygu waa waxa sayidku ka sameeyo. Noocyada oo dhami uma wada eka qof walba. Dadku waxay baraan eeyahaas inay dagaallamaan, iyagoo u bixiya magac xun. Mamnuucida taranka ma aha habka lagu xaliyo dhibaatada. Qaar ka mid ah awoodaha reer Argentine Dogo waa ugaarsiga, raadinta, ilaalinta, ilaalinta, shaqada booliska, baaritaanka mukhaadaraadka, shaqada militariga, hagaha indhoolayaasha, u hogaansanka tartanka iyo Schutzhund.
FCA = Xiriirka Isboortiga Reer Arjantiin
Waa kuwan saddex ka mid ah gabdhaheena khaaska u ah Bella, Zoe iyo Lucero. Dogo Argentinos waxay jecel yihiin inay ku nastaan ​​qorraxda laakiin maaddaama ay yihiin nooc caddaan ah oo dhan waxay heli karaan a qoraxdu waana in taxaddar la muujiyaa, gaar ahaan bilaha kuleylka kulul. Qorraxda ayaa loo isticmaali karaa in looga ilaaliyo maqaarkooda casaanka ah gubashada qorraxda waana inay sidoo kale helaan meelo har leh sidoo kale. '
'Donna Auca Liu, eeydayda Dogo Argentino eey tahay. Mararka qaar Dogo Argentinos waxay ku yeelan karaan meel madow madaxa oo loo yaqaan 'pirata' (dabeecad ku jirta dharka Dogo ee uu aqbalay Federacion Cinologica Argentina). Donna waa jacayl iyo daacad. Waxay jeceshahay cuntada taas oo wanaagsan, maxaa yeelay waxay si dhaqso leh u baraneysaa tabaha, abaalmarintana waa dhowr jeer oo ka mid ah Royal Canin Maxi - Junior. Waxa kaliya ee aysan cunin waa caleenta cagaaran saladhka iyo liinta. Waxay kugu ag socdaa: xitaa waad ku kaxaysan kartaa baaskiil ama shaashad shaashad ah waxayna ku socon doontaa isla xawaare isku mid ah . Uma ciyo sida eyda kale u ciyaan (kaliya marka qof aan aqoon u laheyn uu guriga agtiisa ku dhow yahay - marka mowduuca ka baxo, waxay joojisaa qeylada).
'Donna Auca Liu, haweeneyda burcad-badeedda ah ee Dogo Argentino eey ah iyada oo ah eey yar oo 37-jir ah. Dogos oo leh baro madow madaxooda waxaa loo yaqaan 'piratas.'
'Waxaa loo tagay' Dogos Facon 'markii uu 7 bilood jiray, oo uu qaaday Lankford sawir ka dib guushiisii ​​ugu horreysay ee ugu Fiican ee Taranka!'
'Kilo 10 bilood ah iyo Facon 7 bilood, kadib markii ay iskalaabteen dhabarka ugu wanaagsan ee Taranka.'
Taylor the Dogo oo 6 jir ah— 'Waa eey si wanaagsan loo tababaray wuuna jecel yahay dadka.'
Diego the Dogo hal sano iyo 110 lbs. (54 kg)
Diego eey Dogo ee 10 toddobaad jir ah
feeder shaybaarka Jarmalka adhijir isku darka
Maverick the Dogo da'da 1 sano jir ah— Waxaan helay Eygayga yar ee Maverick oo lix bilood jira. Mulkiilihiisa asalka ah wuxuu ii sheegay inuusan sameyn doonin. Wuxuu ahaa qashin ka soo baxay qashin ee 13 mana helin nafaqada uu u baahnaa. Wuxuu ahaa mid dhuuban oo aad u daciif ah, laakiin quudinta seddex saacadood iyo booqashooyin badan oo dhaqaatiirta xoolaha ah wuxuu ka dhigay inuu noqdo eey faraxsan, caafimaad qaba oo jecel saaxiibkiis Gator (a Chiweenie ). Isaguba wuu is fahmaa eeyaha oo dhan, yar ama weyn oo jecel bisadaha iyo digaag sidoo kale. Marnaba ma muujiyo gardarro. '
Eeg tusaalooyin badan oo ah Dogo Argentino
Sawirada Dogo Argentino 1
Sawirada Dogo Argentino 2
timberwolf malamiyo yaryar oo iib ah
4 bilood jir ey ey buur bernese ah
ey eey a ilaa z
chihuahua oo eey weiner isku darka